thread အလေးချိန်ဇယား - Zhuji Feihu ချည်မျှင်စက် Co. ,, Ltd မှ
သူကအသုံးအများဆုံးအလေးချိန် system ကိုချိန်တွယ်ရန်လိုအပ်သည်ကီလိုမီတာအတွင်းရှိချည်ရဲ့အရှည်ကိုသတ်မှတ်ပါတယ် 1 ကီလိုဂရမ်. ထိုကွောငျ့, ကြီးမြတ်သောအလေးချိန် ဂဏန်း (အဆိုပါအတိုကောက်အားဖြင့်အမေရိကန်စံအတွက်ညွှန်ပြ wt) တစ်ဦးပိုမိုပါးလွှာညွှန်ပြ, အသေးစိတ်ချည်. ချည်အလေးချိန်၏အမေရိကန်စံနှုန်းတစ်ခုရှေ့သို့မျဉ်းစောင်းများကကွဲကွာနှစ်ခုနံပါတ်များကိုအသုံးပြုထားတဲ့ဂျပန်များ၏ Gunze အရေအတွက်စံကနေမွေးစားခဲ့သည်. ပထမဦးဆုံးနံပါတ်ကိုက်ညီ wt အဆိုပါချည်နှင့်ဒုတိယအရေအတွက်ကိုအရေအတွက်ဖိုင်ဘာအများအပြား strands အချောချည် compose ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်ဘယ်လိုဆိုတာကိုပြသ. တဦးတည်းချည်ဖြစ်စေခြင်းငှါတူညီတဲ့အလေးချိန်၏သုံး strands ခြုံဖို့ဘုံက, ဒီအမေရိကန်အဆင့်အတန်းအတွက်တရားဝင်လိုအပ်ချက်မဟုတ်သော်လည်း (ထို့ကြောင့်လျော့နည်းသိကောင်းစရာများအရာဖြစ်ပါသည်).
အလင်း 60 wt #60/3 bobbin သို့မဟုတ်ပန်းကပ်ပုံဖော်ခြင်း
ပါးသော 50 wt #50/3 bobbin သို့မဟုတ်ပန်းကပ်ပုံဖော်ခြင်း
ပုံမှန်အစည်းအဝေး 40 wt #40/3 ဂွမ်းစောင်ပြုလုပ်ခြင်း
ကူရှင်ချုပ် 30 wt #30/3 အလှဆင်
လေးလံသော 20 wt #20/3 အလှဆင်
တစ်ဦးက denier အလေးချိန်သတ်မှတ်ချက်ပြည်နယ်များမည်မျှဂရမ် 9,000 အဆိုပါချည်အလေးချိန်၏မီတာ. ဘုံချည်အလေးချိန်စနစ်ကမတူဘဲ, အဆိုပါ denier အရေအတွက်က သာ., အဆိုပါချည်ပုထူ. အဆိုပါ denier အလေးချိန်စနစ်က, ဘုံအလေးချိန်စနစ်အားတူ၏, ထို့အပြင်ချောချည်ဖြစ်စေခြင်းငှါအတူတူပတ်ရစ်ခဲ့ကြရသောသတ်မှတ်ထားသောအလေးချိန်၏ strands ၏နံပါတ်သတ်မှတ်ပါတယ်.
Tex ၏ဂရမ်ထဲမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်ပါတယ် 1,000 ချည်၏မီတာ. အကယ်. 1,000 မီတာ 25 အလေးချိန် ဂရမ်, က Tex ဖြစ်ပါသည် 25. ပိုကြီးတဲ့ Tex နံပါတ်များကိုလေးလံချည်များမှာ. Tex ဥရောပနှင့်ကနေဒါတွင်ပိုမိုလေ့ကိုအသုံးပြုသည်.
တချို့ကချည်ထုတ်လုပ်သူ, အလွန်ချောပိုးချည်ထုတ်လုပ်အထူးသဖြင့်သူတို့အား, သုံးပြီးချည်တိုင်းတာခြင်းများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ချိန်ခွင်လျှောက်ထား "တစုံတခု" သို့မဟုတ်သုည (မဟုတ်များ၏အရွယ်အစားကိုတိုင်းတာရာတွင်အသုံးပြုသည့်သုညနဲ့မတူပဲ အမျိုးအနွယ်ကိုပုတီး). ပေးထားသောထုတ်လုပ်သူ \_ 's ရောင်စဉ်အတွင်း, တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မား "တစုံတခုရေတွက်" တစ်အသေးစိတ်ချည်ညွှန်ပြ: ဒီများသောအားဖြင့်တစ်ဦးရှေ့သို့မျဉ်းစောင်းများနှင့်တစ်ဦးသုညခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်တစ်ခုတည်းဂဏန်းအဖြစ်ပေးထား— ဥပမာ, 3/0 သုံးတစုံတခုချည်တစ်ခုသို့မဟုတ်ချည်ရဲ့အရွယ်အစားကိုညွှန်ပြ "000", တူညီသောထုတ်လုပ်သူများကထုတ်လုပ်သည်အခြားချည်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာပေမယ့်ဒီနံပါတ်ကိုသာအရေးပါမှုရှိပါတယ်: တဦးတည်းထုတ်လုပ်သူ \_ 's 4/0 အစဉ်အမြဲပင်ထုတ်လုပ်သူ \_ 's ထက်ပိုချောပါလိမ့်မည် 2/0, ယင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါလျှင်မူကားဘာမျှမဆိုလိုပါလိမ့်မယ် 4/0 အခြားထုတ်လုပ်သူများ. အဆိုပါတစုံတခုအတိုင်းအတာထို့ကြောင့်အခြားအကိုပိုမို-ယေဘူယျအလေးချိန်အကြေးခွံမှပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အသင့်လျော်မဟုတ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်ဘုံအသုံးပြုသော်လည်း.
လွန်ခဲ့သော : Kirby \_ 's Epic ချည်ခင်